IIMILO ZETAYILE (UYILO LWANGAPHAKATHI IINGCINGA KUNYE NEMIFANEKISO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iimilo zetayile (Uyilo lwangaphakathi Iingcinga kunye neMifanekiso)
Iimilo zetayile (Uyilo lwangaphakathi Iingcinga kunye neMifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yethu yeemilo zethayile kubandakanya imibono yangaphakathi yoyilo lomgangatho, ikhitshi elingumqolo kunye neeshawari zangasese.
Xa ukhetha iithayile zininzi izigqibo ezahlukileyo oya kuthi uzenze. Ezinye zezi zinto zibandakanya: iimilo zethayile, ubukhulu, imibala, iipateni, kunye nezinto ezinokubalwa ezimbalwa. Nasi isikhokelo sakho kwiimo zeethayile zokukunceda ukhethe efanelekileyo yeprojekthi yoyilo lwakho.
Imilo yethayile ibalulekile kuba iyakutshintsha ukuba yeyiphi iipateni onokuzisebenzisa kwaye ungazisebenzisi ngokusekwe kubume betayile kunye nezinto ozithandayo. Ezinye zeemilo eziqhelekileyo zidweliswe apha ngezantsi, kodwa gcina engqondweni ukuba kukho isiko lokuma kwendalo okanye ijiyometri onqwenela ukuba nayo, kukho iindlela zokukhetha ngokwesiko kwixabiso leprimiyamu. Ndwendwela iphepha lethu malunga iipateni zethayile kunye nobeko ngeenkcukacha ezithe kratya ngeendlela zokufumana uyilo olufanelekileyo.
Iithayile ezinkulu zeHexagon
Lantern Waxonxa Tile
Iithayile zesikwere zilula nje, imilo enamacala amane alinganayo kunye nee-engile. Kule meko kulula ukuba ibe yinto elungileyo kuba ivumela izixa ezikhulu zeempawu ezintsonkothileyo kunye nokwenza ngokwezifiso ukonyusa itayile kunye nokwenza ukuba ibe yeyayo ngokukodwa.
Ubungakanani buya kwahluka kakhulu ngeethayile zesikwere. Olunye ubungakanani obuqhelekileyo buza kusuka kwi-12 nge-12, 18 nge-18 kunye nangama-24 amakhulu ngama-24. Banokujongwa ngokukodwa ngaphezulu okanye bancitshiswe. I-4 nge-4 kunye ne-6 nge-6 iithayile zihlala zisetyenziswa xa kukhangelwa ii-accents, imida, okanye ezinye izinto zokuhombisa.
OoMosaia bakwasetyenziswa kunye neethayile zesikwere, ezi zincinci nokuba zincinci kuneziqwengana ezisusela ku-1 ukuya ku-1 ukuya kwisi-2 ngesi-2. Ukwenza unyuko kunye nesimbo kube lula ezi ziqwenga zihlala zixhonywe ngocingo ukuxhasa ufakelo olulula. Ukongeza kuluhlu olukhulu lobungakanani obukhoyo, kuyafana nakwizinto ezinokusetyenziswa.
Iithayile zinokuza nangayiphi na into eyenziwe nge-ceramic, porcelain, glass to marble. Nazi Umahluko phakathi kwethayile ye-ceramic kunye ne-porcelain njengokuqina kunye neendleko ezinokuchaphazela isigqibo sakho sokuthenga. Ukukhetha imathiriyeli kulapho kunokuba yinto enobuqhetseba, kwaye izinto zinokufuna ukuba ibe ngumyalelo wesiko ngenxa yokhetho lwesitokhwe kuphela kukudityaniswa kobungakanani, imibala kunye nezinto eziphathekayo.
Iithayile zoxande ziya kulandela ngokufanayo kwiithayile zesikwere ezikhankanywe ngaphambili. Ubume buhle ngokulula ke buya kuvumela ubungakanani obahlukeneyo, imibala kunye nezinto. Olunye ubungakanani obudumileyo buya kuba zi-3 ngo-6 ekubhekiswa kuzo njengeethayile zendlela yangaphantsi kunye no-12 ukuya ku-24 ekubhekiswa kuzo njengethayile yentsimi.
ishawa yethayile yengqalutye
Ukongeza kwezo kuya kubakho ukhetho olunje ngeplanga, ngesiqhelo esi-6 ukuya kwangama-24, umahluko omde wethayile yendlela engaphantsi komhlaba ngo-6 ukuya ku-12, kwaye kukwakho neendlela ezahlukeneyo ze-mosaic ezikhoyo njengezikwere, kumnatha ukuya yenza ufakelo olulula. Xa kuziwa kwiithayile zoxande, kukho amacandelwana amaninzi axelela inkcukacha ezithe kratya malunga nobungakanani kunye nobeko lwethayile.
Kukhankanywe apha ngasentla luxande I-subway tile ekhitshini yokubuyela umva . Igama livela kufakelo olukhulu lwezi tile kwizikhululo zikaloliwe eziseNew York. Ngabantu abaninzi abahamba bengena bephuma kwizikhululo zikaloliwe eziseNew York mihla le umbutho kunye negama linamathela kwangoko. Ngelixa ucinga ngesikhululo sikaloliwe ongaphantsi akakhali ngezimvo zobuhle kunye nobunkunkqele kwezi tile xa zibekwe emakhaya zinokongeza nje oko.
Njengoko sele kukhankanyiwe, le tile yendlela yangaphantsi ikusapho oluxande kwaye iya kuba nobubanzi bayo nayiphi na indawo ukusuka ku-1 kuye ku-4 kunye nobude obungu-4, 6, 8 no-12. Ezi ziya kunika iintlobo ngeentlobo zeenkangeleko ezahlukeneyo ngelixa zisalawula ziyinyani kwitayile yangaphantsi . Ngenxa yobume bezi zinto zihlala zisetyenziswa eludongeni xa kuthelekiswa endaweni yomgangatho, kwaye zenze ukubuyela umva okuhle ekhitshini okanye kumagumbi okuhlambela kwaye zinokubekwa kwiipateni ezininzi ezahlukeneyo.
Iithayile zikaMoses ziya kuba kwicandelwana uninzi lwayo nayiphi na imilo yethayile. Ezi ntlobo zethayile bezikho ukusukela kusuku lwakudala kwaye ziye zamelana neemvavanyo zexesha lokuhlala zithandwa kuyilo lwasekhaya ukuza kuthi ga ngoku. Iithayile zikaMoses ziya kugqitywa ngobungakanani bazo obuncinci, zihlala zijikeleze u-2 ukuya ezantsi njengo-½. Ngenxa yobukhulu obuncinci obukhankanyiweyo kunye nokufumaneka phantse kwawo nawuphi na umbala kunye neemilo ezinokubakho ze-mosaic aziphelelwa lixesha kwaye zinokusetyenziswa kuluhlu olukhulu lwezithuba ezahlukeneyo. Nokuba lilonke igumbi lokuhlambela okanye umda omncinci okanye ukubekwa kwendalo kuyo iya kongeza ifuthe elikhulu kwisithuba.
I-penny tile iya kuchongwa ngokulula ngegama layo kuba ithatha ukubonakala kwento ebizwa ngokuba yiyo, ipenny. Ezi tile ziya kuba zizangqa ezincinci malunga nobukhulu benguqu yakho evulekileyo. Olu hlobo lufumana ukuthandwa, luqala ngokudityaniswa okumnyama nokumhlophe okungahambelani ngoku kuvula uluhlu olukhulu lwemibala kunye nokugqitywa kunye nezixhobo.
Icala elisezantsi ekusebenziseni ithayile yesangqa endaweni yesiqwengana esijikelezileyo kukuba iya kufuna udaka olungaphezulu. Oku kunokusetyenziswa njengecala elisezantsi nangona kunjalo, ukuba uthabathe ukongezwa kwesiliphu kunye nenkangeleko eya kongezwa ngodaka olungaphezulu. Ukukhetha udaka olufanelekileyo lombala kuya kuba yinxalenye ebaluleke kakhulu kwiimeko ezinje. Ngenxa yobungakanani, ezi zihlala zibekwa kwimesh emva okanye kwelinye iphepha, elifana neziqwenga zemosisi, ukwenza ukufakwa ngokulula.
Iithayile ze-octagon lukhetho olungapheliyo lwexesha kunye namacala asibhozo. Umzekelo osetyenziswa rhoqo ngumbala we-octagon kunye nezikwere / iidayimani ezinemibala eyahlukileyo kwiikona. Oku kubizwa ngokuba yichaphaza le-octagon kuba ii-octagon zazihlala zimhlophe ngelixa izikwere / iidayimani zimnyama, zifana namachaphaza. Oku kunokusetyenziswa njenge Iithayile zomgangatho wegumbi lokuhlambela , okanye i-backsplashes yokubukeka kweklasikhi okanye ukuzisa i-flair eyaziwayo, yanamhlanje. Ezi tile zinokufumaneka kuluhlu lwemibala, ubungakanani, iimilo kunye nezinto eziza kulunga nasiphi na isitayile.
Ubume beheksagoni obunamacala amathandathu buye bathandwa kakhulu ekwakheni nasekulungiseni iiprojekthi, ngakumbi kuyilo lwasekhaya. Ezi hexagoni zinokuza ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu. Iithayile zinokuhonjiswa okanye zigqitywe matte. Ngokwesiqhelo, ezi tile ziya kuba malunga ne-2 inye, zigcina izinto zincinci kwaye zihlala zisebenzisa isitayile semosic. Xa zidityanisiwe ezi tile zinokudala ukutyibilika okuphefumlayo okanye ukubuyela umva. Ezi tile zifumaneka kwizinto ezahlukeneyo, ukugqitywa, imibala kunye nobukhulu.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iithayile zehexagon ziyafumaneka kuluhlu lobungakanani. Olunye lolo bukhulu luya kuba lukhulu kunezo ziqhelekileyo iithayile ezi-2. Ezi tile zinkulu zinokufikelela kwi-12. Ziyakusetyenziswa rhoqo ukwenza imigangatho yomgangatho okanye olunye ufakelo olukhulu olunokuchitha ixesha elininzi ngamaqhekeza amancinci. Ezi tile zehexagon zihlala zimile kumgangatho wexabiso eliphantsi.
Olunye umahluko lweheksagoni iya kuba luhlobo olude. Ithatha ubume beheksagoni esisiseko kwaye iyolulwa, kwaye ezo ziqwenga zisetyenziswa kwipateni okanye kwimoses. Oku kuyakongeza okwahlukileyo kunye neempawu zangoku kule ndawo ikhoyo. Le tile ihlala isetyenziswa ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlambela kumakhaya ale mihla. Ezi tile ziya kufumaneka ngemibala emininzi kunye nezixhobo.
Ithayile ye-rhomboid iya kuba luthotho lwedayimane okanye iithayile ezimile ngokwesikwere kuhlobo lweshiti ngesiqhelo kwipateni yokuphamba. Ngokwesiqhelo azizukubekwa ndawo nganye ngenxa yeesayizi ezincinci eziza nazo. Iithayile zerhomboid ziya kuhlala zisetyenziselwa ukubuyela umva okanye amakhitshi okanye iishawari.
Iithayile zantathu zonxantathu, nangona zibonakala zilula zingenza iintlobo ezahlukeneyo zokubonakala kunye nezitayile kwindawo oyifunayo. Oonxantathu banokubekwa ngokulula kunye ukwenza ezinye iimilo zejiyometri kubandakanya izikwere kunye needayimane. Iziqwenga zonxantathu ziya kuza ngeendlela ezimbalwa ezahlukeneyo kubandakanya kodwa zingaphelelanga: isikwere sendabuko esimile, uxande, kunye nobukhulu obuncinci nganye. Ezi ziqwenga zinokwenziwa phantse kubo nabuphi na ubungakanani okanye umbala onokucinga ngawo ukujonga ukubukeka kwesiko okuya kuthi kugqibe isithuba.
Iidayimani zikwimo entle yokusebenzisa iithayile. Ezi milo ziya kuvumela i-mosaic enkulu kwaye zihlala zikhethwa njengenguqulelo engaphambili ngakumbi kumzekelo wesikwere okanye ipateni yethayile. Iidayimani eziqhelekileyo ezimile iya kuba yinto enokubekwa ngokulula ecaleni kwenye. Oku kuyakwenza uyilo lokugubungela nasiphi na isixa sendawo. Ngelixa ukwenza imilo yedayimane ngaphandle kwethayile yesikwere kungenziwa, iithayile zedayimane ngokukodwa ziya kuba nemilo eyahlukileyo, eyahlukileyo kunesikwere esijikwe ecaleni. Iithayile zedayim ziqhele ukusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela nanjenge-backsplashes kwaye zinokuza kwizinto ezahlukeneyo kwaye zigqibe.
Ubume beepentagon ezinamacala amahlanu buye bathandwa kumaxesha akutshanje, ngakumbi kuyilo lwasekhaya. Ezi pentagon zinokuza ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu ngokusekwe kwinkampani. Iithayile zinokuhonjiswa okanye zigqitywe matte. Iithayile zepentagon eziqhelekileyo ziya kusetyenziselwa ukubuyela umva, imizobo, ukujongwa ngaphandle, imida okanye ezinye izinto ezifakwayo. Ezi tile zifumaneka kwizinto ezahlukeneyo, ukugqitywa, imibala kunye nobukhulu.
Kukho amaqela eethayile ezikhethekileyo ezibandakanya ukwahluka kwee curve ukwenza iimilo. Oku kuvumela abanye ngaphandle kwebhokisi becinga ukwenza inkangeleko yesiqhelo eya kuthi ibambe. Ezi ziqwenga zihlala ziba ziindawo ekugxilwe kuzo kwigumbi lokuhlambela okanye ekhitshini. Kuqhelekile ukubhangqa ezi kunye nolunye uyilo olusisiseko ukuze ungagqithisi isithuba esinokuhonjiswa okuninzi kunye neempawu ezizodwa. Ezinye zezo milo zezi zilandelayo.
Iithayile zeArabic ziye zafumana ukuthandwa ukongeza ubuhle kunye nobugcisa kwilizwe langoku elilelona lincinci. Ezi tile zihonjiswe ngakumbi kwaye zibonelela ngokwahluka okwahlukeneyo. Iithayile ze-arabesque zinokuza njengeetayile ze-mosaic kunye neethayile ze-beveled. UMoses Iithayile zeArabesque izakuza ngamashiti kwaye iza kupolishwa kwizinto ezininzi okanye ukhetho lombala. Inketho ye-beveled edge iya kunika ubume kunye nobukhulu kwindawo oyifunayo ngaphandle kokwenza nantoni na egqithileyo!
phi ukuthengisa ilokhwe yomtshato
Kwakhona kwaziwa ngokuba yi-fish scale tile okanye i-ogee yehla i-ogee tile iya kusetyenziswa rhoqo kwiindawo zokuhlambela kunye ne-backsplashes. Ubume bufana negophe elifana nesikali sentlanzi (yiyo loo nto igama lesidlaliso). Iziqwenga zinokubekwa kwiipateni ezahlukeneyo, nganye nganye idala inkangeleko entsha. Isikali esijongwa ziithayile sinokubeka ecaleni kwelinye ukwenza imiqolo.
Iithayile zesitayile se-Ogee nazo zinokungalingani kwaye zidibanise kwiziphelo ezithe tyaba. Kuxhomekeke kubume bendawo ozama ukuyizalisa ungabakhuphela ngaphandle okanye wenze ipateni yesetyhula.
Iithayile zokukhetha lolunye uhlobo lwethayile olunokongeza kubume boyilo. Yimilo emacaleni amathandathu ebonakala ngathi ii-trapezoids ezimbini ezilinganayo zabekwa kunye. Obu bume bunokongeza kwintwana yokuyila. Zingadityaniswa neziqwenga zedayimane ngokwenza ipateni ngokudibanisa iimilo okanye zinokusetyenziswa zodwa. Into emnandi malunga nepikethi kukuba inezantsi ethe tyaba kunye namacala okwenza ukubeka ipateni ngokulula.
Njengoko igama libonisa ukuba isibane esimile kwithayile sifana kakhulu nesibane. Ubume obu buqhele ukudideka kunye ne-arabesque ngenxa yokufana kwayo kwiimilo. Ezi tile ziya kuba nezinto ezininzi ezinokukhetha kunye neempawu iarabesque enokuthi ibandakanye ukhetho lweetayile ze-beveled kunye ne-mosaic kunye nezinto ezahlukeneyo zemibala kunye nemibala.
Ithayile yomtshangatshangiso iya kuba yindawo ekugxilwe kuyo kuyo nayiphi na iprojekthi yoyilo lwangaphakathi ebekwe kuyo. Inenkangeleko yendalo eyahlukileyo efana namagama abonisa, amaza olwandle. I-tile etshangatshangiswayo ibonakala ifana nethayile yangaphantsi, kodwa i-middles igobile kancinci, inika intshukumo kwiithayile. Ezi tile ziya kuba nzima ukuzibeka kuba azizukuwenza kodwa zilungelelane.
Ubeko lobeko luhlala luthathelwa ingqalelo ngaphambi kokuthatha isigqibo sokusebenzisa isiqwenga somtshangatshangiso kwaye zihlala zisetyenziswa kwizithuba zokuyila ngakumbi xa kuthelekiswa nento efuna ukusebenza. Njengazo zonke ezinye iithayile ezikhankanyiweyo, iithayile zokutshangatshangisa ziyafumaneka kwizinto ezahlukeneyo, imibala, ukugqitywa, ubungakanani kunye neemilo.
Ngoncedo lokwenza uyilo kunye nokujonga izinto ezahlukeneyo ezinje ngethayile, kukho iinkqubo ezahlukeneyo zesoftware ezinokunceda. Kukho igumbi elithile Isoftware yokulungisa indawo yangasese njengo Isoftware yoyilo ekhitshini ngokubona umgangatho, udonga okanye i-backsplash tile kwimbonakalo emi-3.
Thatha isandla sam ingoma yengoma yomtshato
Iingcamango zoyilo i-ShelfEscape Shelf $ 99.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-331 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UCarrara White Marble Arabesque Tiles Polis… $ 54.99 umthengisi ogqibelele (36) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IZiko leLitye elikwi-Intanethi iCarrara White Marble… $ 18.99 umthengisi ogqibelele (Mbini) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-WOWOSS 36 Ipakethe yePlanga engagqitywanga ... $ 10.99 umthengisi ogqibelele (180) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Indlela yokwenza i-brooch bouquet
imifanekiso yoyilo yangasese
iilokhwe zokunxiba emtshatweni ngoSeptemba